Akhriso: Cabdalla Cabdalla Oo Laga Saaray NISA – Goobjoog News
Qoraal lasoo dhigay barta Twitterka ay ku leedahay hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in liiska hay’addaasi laga saaray Jeneraal Cabdalla Cabdalla oo ahaa ku xigeenkii hore ee agaasimaha hay’addan.
Waxaa qoraalkan lagu sheegay in u Jeneraal Cabdalla Cabdalla bixiyey wareysi uu ku sheegay eedeymo, sidaasi darteedna ay hay’adda guddi u saartay, kaasi oo ugu dambeyn go’aamiyey in liiska laga saaro.
Qoraalkan laguma caddeyn nooca eedeynta uu jeediyey Cabdalla, hase ahaatee waxaa lagu soo koobay inuusan u qalmin kasii mid ahaanshiyaha NISA, laguna aamini karin shaqo qaran oo xasaasi ah.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka NISA.
Dhageyso: Qabanqaabada Shirka Madaxda Dowlad Goboleedyada Oo Ka Socota Kismaayo